Pan’s Labyrinth (2006) | MM Movie Store
၂၀၀၆ ခုနှဈကထှကျရှိခဲ့တဲ့ Pan’s Labyrinth ဇာတျကားဟာ၇၉ကွိမျမွောကျအျောစကာဆုပေးပှဲမှာBest Art Direction ဆု Best Cinematography ဆုနဲ့ Best Makeup ဆုရရှိထားသလိုဒီဇာတျကားဟာကုနျကငြှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၉သနျးအကုနျအကခြံရိုကျကူးထားပမေယျ့ဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၈၃သနျးကြျော ပွနျလညျရရှိထားပါတယျ။
8.2/10 ratingကွမျးကွမျးနဲ့ဒီဇာတျလမျးလေးဟာတော့နတျသမီးပုံပွငျ တဈပုဒျပျေါအခွခေံထားပမေယျ့ကလေးတှမေကွညျ့သငျ့တဲ့ Horror and Fantascy Movie ကောငျးတဈပုဒျဖွဈပါတယျ…
စပိနျပွညျတှငျးစဈပွီးစအခြိနျ ပထှေးဖွဈသူစဈဗိုလျ စခနျးခရြာ တောနယျဘကျကိုမိခငျဖွဈသူနဲ့အတူပွောငျးရှလေ့ာရတဲ့ ၁၁နှဈသမီး အိုဖီလီယာ လေးဟာသူတို့အိမျအနီးကတောအုပျထဲမှာဝင်ျကဘာတဈခုကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ….
ဝင်ျကဘာထဲမှာကလေးမလေးသာမွငျနိုငျတဲ့ဆိတျတဈပိုငျးလူတဈပိုငျးနတျရဲ့ပွောကွားခကျြအရ…အိုဖီလီယာဟာမွအေောကျကမ်ဘာကပြောကျဆုံးနတေဲ့မငျးသမီးလေးတဈပါးဖွဈကွောငျးသိရှိလာရပါတယျ…သူ့ရဲ့ကမ်ဘာကိုပွနျသှားဖို့အတှကျ တာဝနျသုံးခုကိုထမျးဆောငျရဖို့ဖွဈလာပါတယျ …
ပထမတာဝနျက အစားကွီးတဲ့ ဖားပွုတျထှားကွီးခံတှငျးထဲက ရှသေော့ရဖို့ဒုတိယတာဝနျက ကလေးစားနတျဆိုးထံကနေ ရှဓေားရယူဖို့နဲ့တတိယတာဝနျကတော့….အျောဖလေီယား တဈယောကျ တာဝနျတှပွေီးမွောကျပါမလား…အိုဖီလီယာ့ပထှေးတို့တပျနဲ့ တောခိုသူပုနျတပျတို့တိုကျပှဲကလညျးအရှိနျမွငျ့လာတဲ့အခါ ….
Fairy tale နဲ့ စပိနျ ပွညျတှငျးစဈနဲ့အားပွိုငျတငျဆကျထားတဲ့ဒီဇာတျလမျးလေးဟာနတျသမီးတှေ မိစ်ဆာတှေ စဈသားတှေ ဇာတျရုပျစုံစှာပါဝငျတဲ့အတှကျစိတျဝငျစားစရာကောငျးလှပွီးအားလပျရကျမှာမဖွဈမနကွေညျ့ရှုသငျ့တဲ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားလညျးဖွဈပါတယျ…
၂၀၀၆ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Pan’s Labyrinth ဇာတ်ကားဟာ၇၉ကြိမ်မြောက်အော်စကာဆုပေးပွဲမှာBest Art Direction ဆု Best Cinematography ဆုနဲ့ Best Makeup ဆုရရှိထားသလိုဒီဇာတ်ကားဟာကုန်ကျငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉သန်းအကုန်အကျခံရိုက်ကူးထားပေမယ့်ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၃သန်းကျော် ပြန်လည်ရရှိထားပါတယ်။
8.2/10 ratingကြမ်းကြမ်းနဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာတော့နတ်သမီးပုံပြင် တစ်ပုဒ်ပေါ်အခြေခံထားပေမယ့်ကလေးတွေမကြည့်သင့်တဲ့ Horror and Fantascy Movie ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်…
စပိန်ပြည်တွင်းစစ်ပြီးစအချိန် ပထွေးဖြစ်သူစစ်ဗိုလ် စခန်းချရာ တောနယ်ဘက်ကိုမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့လာရတဲ့ ၁၁နှစ်သမီး အိုဖီလီယာ လေးဟာသူတို့အိမ်အနီးကတောအုပ်ထဲမှာဝင်္ကဘာတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်….
ဝင်္ကဘာထဲမှာကလေးမလေးသာမြင်နိုင်တဲ့ဆိတ်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းနတ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရ…အိုဖီလီယာဟာမြေအောက်ကမ္ဘာကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာရပါတယ်…သူ့ရဲ့ကမ္ဘာကိုပြန်သွားဖို့အတွက် တာဝန်သုံးခုကိုထမ်းဆောင်ရဖို့ဖြစ်လာပါတယ် …
ပထမတာဝန်က အစားကြီးတဲ့ ဖားပြုတ်ထွားကြီးခံတွင်းထဲက ရွှေသော့ရဖို့ဒုတိယတာဝန်က ကလေးစားနတ်ဆိုးထံကနေ ရွှေဓားရယူဖို့နဲ့တတိယတာဝန်ကတော့….အော်ဖေလီယား တစ်ယောက် တာဝန်တွေပြီးမြောက်ပါမလား…အိုဖီလီယာ့ပထွေးတို့တပ်နဲ့ တောခိုသူပုန်တပ်တို့တိုက်ပွဲကလည်းအရှိန်မြင့်လာတဲ့အခါ ….
Fairy tale နဲ့ စပိန် ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အားပြိုင်တင်ဆက်ထားတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာနတ်သမီးတွေ မိစ္ဆာတွေ စစ်သားတွေ ဇာတ်ရုပ်စုံစွာပါဝင်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပြီးအားလပ်ရက်မှာမဖြစ်မနေကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်…
(James Bond) Skyfall (2012)